Guddoomiye Najax oo xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay Xubno Shabaab ah - Awdinle Online
Guddoomiye Najax oo xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay Xubno Shabaab ah
February 23, 2020 (Awdinle Online) –Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa faah faahin Guud waxaa ay ka bixiyeen howlgal Saacadihii la soo dhaafay Ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaas.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa sheegay in Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ay howlgal ka fuliyeen deegaannada,Baladul amiin, Tooratooroow, Macalinka, Buulo Bashiir, Iyo degaano kale oo hoosyimaado degmada Aawdheegle iyo degaanada Bariire, iyo Sabiid Caanoole.
Waxaa uu sheegay Guddoomiyaha in howlgalladaas ay ahaayeen kuwo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab,isla markaana Ciidanka DANAB ay nolosha ku qabteen Lix Xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab iyo hubkii ay wateen waa sida uu hadalka u dhigay.
“Howlgalkani ujeedkiisu yahay burburinta meelaha ay kudhuumaaleeysanayaan Al-shabaab ayaa waxaa sameeynaya Ciidmadda Kumaandooska Xoogga Dalka Danab,waxaana lagu burburiyey dhowr xarumaad,sidoo kalena lagu qabtey lix xbnood kuwo kalena ay ku raad joogaan ayuu yiri” Guddoomiye Najax.
Si kastaba howlgalkaan uu sheegay Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose in Ciidanka DANAB ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaas ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen Xerada Ceel Saliini,iyaga oo soo bandhigay Gaadiid iyo hub ay ku qabsadeen weerarkaas.
Previous articleGuddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Wakiilada Puntland ‘Madaxweyne Deni wuxuu ku ciyaaray Hab-maamuuskii dowladnimada “
Next articleDhageyso:-Laamaha amaanka dowlada somaliya oo qacanta ku dhigay koox burcad ah